WAR MURTIYEED.... BEESHA SACAD (Dhismaha Galmudug) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > WAR MURTIYEED…. BEESHA SACAD (Dhismaha Galmudug)
September 21, 2019 admin557
Fadhi ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta waxgaradaka, iyo dhammaan qaybaha kale ee bulshada Beesha Sacad maantay oo ay taariikhdu tahay 21/09/19, waxay si qoto dheer u lafa-gureen xaaladda guud ee siyaasadeed ee dalka iyo tan gaar ahaaneed ee Gal-mudug.
Markay beeshu aragtay:
Sida faham darrada ah ee loo maareeyey shirkii dabu heshiisiinta ee ka dhacay magaala madaxda D-G-G ee Dhuusa-marreeb, kaas oo ay noo soo baxday in la baal maray dariiqii saxda ahaa ee lagu yaqaannay dib u heshiisiin, maadaama aan hoos loogu daadegin waxyaalihii dhabta ahaa ee ay dadku isku hayeen.
Markay beeshu xaqiiqsatay:
In sida haddaba dhacday la baal mari doono qaabka awood qaybsiga labadii gobol ee Mudug iyo Gal-gaduud ee ku midoobay dhismiha Gal-mudug, sidoo kalana aan la tix gelin doonin baaqii horay Gaalkacyo 14/07/19 ay beeshu uga soo saartay, ee ahayd in la dhawro awood-qaybsi ku salaysan labada gobol ee Mudug Iyo Gal-guduud.
Markay beeshu u caddaatay:
In Wasaaradda Arrimaha Guduha ee DFS aysan tix gelin siineynin rabitaanka beelahaee ku aaddan in loo madax banneeyo magacaabista guddiyada maamul u samaynta Gal-mudug iyo xulashada matalaaddoodaba.
Beeshu waxay soo saartay qodobadan soo socda:
1. Waxay gar waaqsatay soona dhaweyneysaa is casilaaddii wasiir ku xigeenka wasaaradda Xannaanada Xoolaha Xil. C/kariim Khaliif Cabdi Dhalac, taas oo ahayd mid timid waqti munaasab ku ah.
Waxay u caddaynaysaa cid kasta oo loo magacaabo xilkaas uu banneeyay wasiirku aanay ku matali doonin, lagulana shaqayn doonin masuuliyadaas, inta laga xallinayo tabashadii ay ku timid is casilaaddiisu.
Waxay uga digeysaa DF inay sidii horey u dhacday ay soo magacawdo Guddiga maamul u samaynta Gal-mudug, kuna baaqaysaa in loo daayo xulashadooda beelaha ay matali doonaan.
Waxay uga digeysaa DF inay ku xad gudubto awood qaybsiga Beelaha Gal-mudug, uguna baaqaysaa inay u deyso sidii ay aayahooda uga tashan lahaayeen, ayagoo u maraya wada hadal iyo wax isku quur.
Waxay beeshu ugu yeeraysaa dhammaan Bulshada reer Gal-mudug inay midoobaan, nabaddooda iyo horumarkoodana si wadajir iyo is oggol ah uga shaqeeyaan.
Waxay ugu yeeraysaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Beesha sacad ee ku kala sugan Muqdisho, Dhuusa-marreeb, Gaalkacyo iyo dalka dibaddiisaba inay isugu yimaadaan shir deg-deg ah oo ay beeshu ku yeelanayso magaalada Gaalkacyo maalmaha foodda nagu soo haya, si ay uga tashadaan aayahooda.
Ugu dambayntii waxay beeshu baaq nabadeed u diraysaa dhammaan beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Gal-mudug, ayadoo si gaar ah u xusaysa shaqaaqooyinka ka dhacay maalmihii la soo dhaafay beelaha walaalaha ah ee wada dega Mudug Iyo Gal-guduud, intii dhimatay Allaha u naxariisto, intii dhaawacaana Allaha u booga dhayo, inta noolna quluubtooda Allaha isku dumo.
WA BIILLAAHI TAWFIIQ
Guddi loo saaray is rasaaseyntii ciidamada Dowladda (Sawirro)